190 € ary afaka mandeha ianao: manolotra fitsapana COVID-19 eo amin'ny seranam-piaramanidina Vienna
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » 190 € ary afaka mandeha ianao: manolotra fitsapana COVID-19 eo amin'ny seranam-piaramanidina Vienna
Enga anie 3, 2020
190 € ary afaka mandeha ianao: manolotra fanadinana COVID-19 eo an-toerana ny seranam-piaramanidina Vienna
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Vienna hanolotra eo an-toerana Coronavirus fitsapana ho an'ireo mpandeha rehetra tonga tao Flughafen Wien.
Ny tompon'andraikitra aostraliana misahana ny fahasalamana dia mitaky ny olona tonga amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny rivotra mba hanome taratasy fanamarinana ara-pahasalamana hahazoana antoka fa tsy mitondra virus COVID-19. Raha tsy misy ny iray navoaka tsy latsaky ny efatra andro mialoha ny hahatongavany, ny mpandeha dia tsy maintsy misoratra anarana mandritra ny roa herinandro mitokantokana.
Manomboka amin'ny Alatsinainy dia hisy ny safidy hafa ahafahan'ny mpandeha misoroka ny quarantine 14 andro tsy maintsy atao - fanandramana mivantana eo an-toerana miaraka amin'ny fiandrasana adiny telo vao vita ny valiny.
Ny fitsapana PCR Express mitovy amin'izany dia ho an'ireo olona mandao an'i Aotrisy izay mety mila taratasy fanamarinana hitsangatsangana any amin'ny firenen-kafa miaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fidirana na ho an'ny olon-kafa maniry ny hosedraina, hoy ny seranam-piaramanidina ny alahady. Ny serivisy dia mitentina € 190 (210 $ eo ho eo).
Eo am-pamahana ny famotsorana ny hidim-pirenena COVID-19 i Aotrisy amin'izao fotoana izao, miaraka amina orinasa tsy ilaina sasantsasany navela hisokatra taorian'ny fanakatonana efa ho fito herinandro. Ny firenena dia nitatitra aretina mitentina 15,600 ary efa ho 600 ny fahafatesan'io aretina io.